Idlalwa njani iBhulorho ekwi-Intanethi
Awusoze ngaphandle kweqabane lebhulorho ukuba udlala kwi-intanethi. I-Intanethi ibonelela ngeqonga elibalulekileyo labadlali beebhulorho kwihlabathi liphela. Okwangoku, unokufumana amakhulukhulu eewebhusayithi ezinxulumene nebhulorho ezibonelela ngayo yonke into ukusuka kwimidlalo yebhulorho ukuya kwibhulorho.
Ukudlala ibhulorho ekwi-intanethi (ngokuchasene nabantu)
I-Intanethi ivumela abadlali kwihlabathi liphela ukuba badlale ngokuchaseneyo kwi-Intanethi, bahlale benolwazi ngezivumelwano zamva nje, bafumane ukuba kwenzeka ntoni kwibhulorho, kwaye banxibelelane namaqabane afanelekileyo. Omnye unako kibitz (okanye (jonga) iingcali ezidumileyo kuba abadlali bebhulorho abasuka kwii-novice ukuya kwiingcali bonke bayakonwabela ukudlala kwi-Intanethi. Nazi ezinye iindlela ezinokukuhenda:
Isiseko sebhulorho kwi-Intanethi (BBO) : Inkonzo yasimahla ekwi-Intanethi ekukho kuyo abantu abangaphezu kwe-100,000 (kubandakanya nabadlali abaninzi abatsha) abavela kwihlabathi liphela abadlala ibhulorho kwi-Intanethi. I-BBO ivelisa rhoqo usasazo ngqo lweetumente ezinkulu. Le yeyona ndlela ilungileyo yokubukela abadlali behlabathi ababalaseleyo ekusebenzeni.
Imidlalo yeMSN : Inkonzo yasimahla ekwi-Intanethi enika ithuba lokudlala imidlalo emininzi eyahlukeneyo, kubandakanya nebhulorho. Abadlali abavela kwihlabathi lonke bathatha inxaxheba kule ndawo, enika oku kulandelayo:
Ukuziqhelanisa okuhle okanye umdlalo woxinzelelo oluphantsi
Ukudlala okuqhelekileyo nabanye abadlali bebhola
Ukudlala kwimidlalo engcono xa ukulungele ukuba nzulu
OKbridge : Iibhili ze-OKbridge ngokwazo njengeklabhu yebhulorho yoqobo ye-Intanethi. Izixhobo ezikhoyo apha zilula phakathi kwezona zintle zinikezelwa kwiNet. Ngomrhumo weedola ezili-100 ngonyaka, i-OKbridge inikezela ngamathuba okudlala i-24/7 ngesine sakho, udlala neqabane olikhethileyo, okanye umbe nje iqabane ukuba awunayo.
Unokutshatisa ii-wits okanye i-kibitz abanye babadlali abaphambili bomdlalo. Ukuba uzimisele ukudlala e-OKbridge, ungalibali ukuma elayibrari ukuze ujonge uluhlu lwamagama ashunqulelweyo asetyenzisiweyo ngexesha lokudlala - kungenjalo, ungazi njani ukuba i-GLP imele ithamsanqa, iqabane.
Ukufumana ulwazi ngebhulorho kwi-intanethi
Unokufumana uninzi lokungeniswa kwezihloko ezinxulumene nebhulorho ngokufikelela kwiinjini zokukhangela ezinje ngeGoogle, Yahoo!, Okanye iBing. Ukongeza, ezi Webhusayithi zilandelayo zinamakhonkco kunye nolwazi oluluncedo kuzo zonke iintlobo zabadlali bebhulorho:
I-American Contract Bridge League (i-ACBL) : I-ACBL ngumthombo obalaseleyo wolwazi malunga neziganeko zangoku kwindawo yokuhlala kwebhulorho, iiklabhu zebhulorho kulo lonke elaseMelika, kunye neenkomfa kunye neendlela ezintsha. Ubulungu yi- $ 26 kunyaka wokuqala. Emva koko, ubulungu yi- $ 35 ngonyaka okanye i- $ 95 iminyaka emithathu. Ukuba uneminyaka engama-26 okanye ngaphantsi, ubulungu buxabisa i-14 yeedola ngonyaka. (I-ACBL ikhuthaza abadlali abancinci kangangoko banako.)
Ihlabathi leBridge : Ukupapashwa okwaziwayo ngaphandle kweintanethi Ihlabathi leBridge ibeka isampulu yomxholo wayo kwi-intanethi kule ndawo. Apha, unokufumana intshayelelo emfutshane kumdlalo, izandla zebhulorho kunye neepuzzle zabadlali abakwinqanaba eliphakathi, kunye nesicelo esinyanzelekileyo sokubhalisela imagazini engaxhunyiwe kwi-intanethi.
unyango losulelo lomngundo
Ngaba i-adderall ikwenza ulusu
Ufunda njani amaxabiso e-capacitor